Maitiro Ekutanga Kwakanakisa Firm Coil Spring Mattress yemahara | Rayson
Maitiro Ekutanga Kwakanakisa Firm Coil Spring Mattress yemahara
Ndiri kunzwa kunge ndouyu kurasikirwa kukuru, kwete chete kune vazivi venyeredzi, asi nekuda kwekunonzwa isu pachedu mune ino nyika-- kure uye kurasikirwa nekunzwa. Kuti uve akatendeseka, zvakadaro, kupihwa dzimwe nyaya dzacho dzichibata nenyika, zvinoita kunge zvinotengeswa kuti vanhu vafarire zvakanyanya nekuvhenekerwa kana mari yekuvhenekesa ichishaikwa neusiku hwedenga.
Ini zvakare ndakabatana ne 2. Charger yemhando iyi yebhatiri ine 5m mrine Audio plugs iyo inonditendera kubhadharisa bhatiri pasina kutapura muenzaniso, izvo hazvigoneke. Iyo VIP Nyoka ine bhatani diki switch mumhino dzayo iyo inobvumira mwenje kuti ishandurwe uye kusimuka uchishandisa penzura kana screwdriver kunze kwekunge uchiziva kwekutarisa.
Chikamu chete chinofambiswa chiri mutambi, icho chine magineti. Kana zvinhu zvikaoma, kurongeka kwekuenderana kwemhepo kwakarongwa. Iyo polarity yeMhepo yega yega inodzorwa neyazvino nzira. Iyo logation inoratidza iyo nzira yakapusa iyo iyo controller ichatevera. Kuchinja kuchinjika kwazvino kuchinjisa polarity, kupa mumwe nemumwe mhepo a \_ "push / dhonza \_".